Dhageysiga aragtida dadka ee Sharciga Xaq-siinta Ciidanka oo Muqdisho lagu soo gaba-gabeeyey – Kalfadhi
Guddiga Difaaca Golaha Shacabka ayaa soo gaba-gabeeyey dhageysiga qeybaha kala duwan ee bulshada, soojeedintooda ku aaddaneyd Hindisaha Sharciga Xaq-siinta Ciidanka Qalabka Sida. Dhageysigaas, oo shalay ku ekaa, ayaa Guddigu waxay ku qabteen Hotel-ka SYL ee magaalada Muqdisho, waxaana halkaas isugu yimid qeyba kala duwan oo bulshada ka tirsan, si loogu aqriyo Hindisaha Sharciga Xaq-siinta Ciidanka Qalabka Sida ee Soomaaliya, kuwaas oo fikrado ku biiriyey Guddiga.
Golaha Shacabka ayaa dib u eegis ku samaynaya Hindisahan, oo Wareegto Madaxweyne ku soo baxay 31-kii Oktoobar 1969-kii, waana sharci xuquuq siinaya ciidamanka, marka ay ruqseystaan, marka ay naafoobaan iyo marka ay da’da hawl-gabka gaaraan. Xildhibaan Axmed Malim Fiqi, oo Guddiga Difaaca Golaha Shacabka ka tirsan, ayaa yiri “sharcigani waxa uu nidaaminayaa Xuquuqda Ciidanka, marka aysan shaqo qaran qaban karin, oo uu ruqseysto, hawl-gabo ama naafoobo”.
Muwaadin qeyb ka ahaa wax ka dhihista Xeerka Xaq-siinta Ciidanka
Ciidamada Dowladda waxaa hadda ku jira askar naafo ah ama gaaray da’dii hawl-gabka, kuwaas oo wali shaqa ciidan u haaya dalka. Xildhibaan Fiqi waxa uu sheegay inuu Hindisaha Sharcigan si gaar ah u tixgelinayo arrintaas. “Sharcigani (Hindisahani) waxa uu kala saarayaa askariga shaqada qaban kara iyo midka aan qaban karin. Marka, maadaama aysan habooneyn in qofka iska tag la dhaho, waxa uu Sharcigani (Hindisahani) fursad u siinayaa in ay askartaasi ciidanka ka baxaan, ayagoo xuquuqna helaya” ayuu Fiqi.
Xildhibaan Sadiiq Warfaa, oo isna Guddiga Difaaca Golaha Shacabka ka tirsan, ayaa u arka inuu Hindise Sharciyeedkani muhiimad weyn leeyahay. “Waxaan la kulmeynaa Saraakiisha Ciidmada Qalabka Sida, Bulshada Rayidka iyo Ardayda Kuliyadaha Sharciga ee Jaamacadaha Dalka, waxaana ka uruurineynaa ra’yigooda iyo aragtidooda ku aaddan (Hindisaha) Sharciga Xaq-siinta Ciidamada Qalabka Sida, tala wixii ay ku soo gudbiyaan ayaan qaadan doonnaa oo aan ku dari doonnaa Sharcigan (Hindisahan), si loo marsiiyo aqrinta 3-aad ee Golaha Shacabka” ayuu yiri Xildhibaan Warfaa.
Saraakiil Ciidan iyo Xubno ka tirsan Guddiga Difaaca ee Golaha Shacabka
Xildhibaanku waxa uu, sidoo kale, sheegay iney arrintan ka tahay iney dadka baraan shaqada sharci-dejinta, iyadoo xeerarka lagu dhisayo aragtida shacabka. Waxa uu tilmaamay in dhageysigii afkaaraha dadka ee Hindisaha ay ka shaqeynayaan ay wax weyn u tartay. Isagoo ka hadlaya sida ay dadku u dareemeen iney dhageysanayaan ayuu yiri “waxa ay dareemayaan in laga talagelinayo sameynta Shuruucda Dalka, waana muhiim in talada shacabka la ogaado”.
Hindisaha Dib u Eegista ee Xeerka Xaq-siinta Ciidamada Qalabka Sida oo uu markii hore magaciisu ahaa “Sharci L.r.6” ayaa, markii uu soo baxayay 49 sano ka hor, waxa uu dalku ku jiray Nidaamii Kalitaliska (1969-1991), kaas oo aan lahayn Baarlamaan ansixiya Wareegtooyinka Madaxweynaha, waxa uuse si faafaahsan u qeexayay xuquuqda iyo qaabka loo Xaq-siinayo Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya.
Muwaadiniin aqrinaya, kana doodaya Xeerka Xaq-siinta Ciidanka, oo si wareeg ah u fadhiya